Umaki: i-adobe omniture | Martech Zone
Umaki: adobe omniture
Into ebalulekile okufanele uyikhumbule embonini yeMartech ukuthi izinkampani eziningi zisemjikelezweni wokuthuthuka oqhubekayo wokuhlukanisa nokukhulisa ibhizinisi labo. Ipulatifomu oyisebenzise eminyakeni embalwa edlule kungenzeka ukuthi ayisabibikho. UCision ungenye yalezi zinkampani engingazange ngizinake ngokweqiniso njengoba kufanele ngabe nginazo. Babengumholi wamasheya impela uma kukhulunywa ngobudlelwano bomphakathi,
NgoMgqibelo, Disemba 14, 2013 Douglas Karr
I-Distimo inikeza ipulatifomu yohlelo lokusebenza leselula lamahhala yabathuthukisi kanye nedatha yemakethe yohlelo lokusebenza. Ingxenyekazi ye-Distimo ivumela onjiniyela ukuthi balandelele ukulandwa kohlelo lokusebenza lweselula, imali engenayo yohlelo lokusebenza, nokuguqulwa kohlelo lokusebenza kwemikhankaso kuhlelo lwabo lokusebenza kuzitolo eziningi zohlelo lokusebenza. I-Distimo inikeza ama-analytics wohlelo lwabo lweselula mahhala, ibavumela ukuthi baqoqe inani elikhulu lemininingwane nokunemba okuthuthukisiwe kusisombululo sabo esikhokhelwayo, i-AppIQ. I-AppIQ kaDistimo inikeza imininingwane yokuncintisana yansuku zonke yezinhlelo zokusebenza ezimakethe eziningi zeselula.